Izindaba - Njengengxenye yephrojekthi yeChemCycling, iBASF itshale imali eyizigidi eziyi-16 zamaRandi enkampanini kawoyela wepyrolysis Pyrum
Njengengxenye yephrojekthi yeChemCycling, i-BASF itshale imali engama-euro ayizigidi eziyi-16 enkampanini kawoyela yamathayi iPyrum
IBASF SE itshale imali eyizigidi ezingama-16 zamaRandi ePyrum Innovations AG, okuyinkampani egxile kwezobuchwepheshe bamathayi i-pyrolysis technology, enekomkhulu layo eDillingen / Saarland, eJalimane. Ngalolu tshalomali, i-BASF izosekela ukunwetshwa kwesitshalo sePyrum se-pyrolysis eDillingen kanye nokuqhubekisela phambili ubuchwepheshe.
Njengamanje uPyrum usebenzisa isitshalo se-pyrolysis samathayi ezindala, angacubungula amathani afinyelela ku-10,000 wamathayi ngonyaka. Ekupheleni kuka-2022, kuzongezwa imigqa emibili yokukhiqiza efektri ekhona.
I-BASF izomunca iningi lamafutha we-pyrolysis futhi iwasebenzise njengengxenye yendlela yokulinganisa ubukhulu njengengxenye yephrojekthi yayo yokuphinda isebenze ngamakhemikhali ukuyicubungula ibe yimikhiqizo emisha yamakhemikhali. Umkhiqizo wokugcina uzoba ikakhulukazi wamakhasimende asembonini yamaplastiki afuna amapulasitiki asezingeni eliphakeme futhi asebenzayo asuselwa ezintweni ezenziwe kabusha.
Ngaphezu kwalokho, uPyrum uhlela ukwakha ezinye izitshalo zamathaya we-pyrolysis nabalingani abanentshisekelo. Ukuhlelwa kokubambisana kuzosheshisa indlela yokusebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile bukaPyrum ekukhiqizeni ngobuningi. Abatshalizimali besikhathi esizayo balobu buchwepheshe bangaqiniseka ukuthi uwoyela we-pyrolysis owenziwe uzongeniswa yi-BASF futhi usetshenziselwe ukukhiqiza imikhiqizo yamakhemikhali esebenza kahle. Ngakho-ke, ukubambisana kuzosiza ukuvala umjikelezo wemfucuza yepulasitiki yangemva komthengi. Ngokuya nge-DIN EN ISO 14021: 2016-07, amathayi emfucuza achazwa njengodoti wepulasitiki wasemva komthengi.
I-BASF nePyrum balindele ukuthi, ngokubambisana nabanye abalingani, bangakha amathani afinyelela ku-100,000 womkhiqizo wokukhiqizwa kukawoyela we-pyrolysis kusuka kumathayi kadoti eminyakeni embalwa ezayo.
I-BASF izibophezele ekuholeni ukuguqulwa komkhakha wepulasitiki ube ngumnotho oyindilinga. Ekuqaleni kochungechunge lwamanani amakhemikhali, ukufaka izinto zokusetshenziswa ezimbiwa phansi ngezinto ezingavuseleleka kuyindlela eyinhloko kulokhu. Ngalolu tshalomali, sithathe igxathu elibalulekile ngokusungula indawo ebanzi yokuphakela uwoyela we-pyrolysis nokunikeza amakhasimende imikhiqizo yesikali esidayiswayo esuselwa kumfucumfucu wepulasitiki osetshenziswe kabusha ngamakhemikhali.
I-BASF izosebenzisa uwoyela we-pyrolysis wamathayi amadala njengezinto ezengeziwe ezingasetshenziswanga zikawoyela kadoti wepulasitiki oxubile, nokuyinto okugxilwa kuyo isikhathi eside kuphrojekthi yokuphinda isebenze ngamakhemikhali.
Imikhiqizo eyenziwe ngoyili we-pyrolysis usebenzisa indlela yokulinganisa isisindo inezici ezifanayo ncamashi nemikhiqizo eyenziwe kusetshenziswa izinsiza ezinkulu zezinsalela. Ngaphezu kwalokho, bane-carbon footprint ephansi uma iqhathaniswa nemikhiqizo yendabuko. Lesi yisiphetho sokuhlaziywa kweLife Cycle Assessment (LCA) okwenziwe yinkampani yababonisana iSphera egameni leBASF.
Ukuhlaziywa kwe-LCA ikakhulukazi kungafakazela ukuthi lesi simo singasetshenziswa ukukhiqiza i-polyamide 6 (PA6), eyi-polymer epulasitiki, ngokwesibonelo, ekukhiqizeni izingxenye zokusebenza okuphezulu embonini yezimoto. Uma kuqhathaniswa netani elilodwa le-PA6 elikhiqizwe kusetshenziswa izinto ezimbiwa phansi, ithani elilodwa le-PA6 elikhiqizwe kusetshenziswa uwoyela wePyrum tire pyrolysis ngokusebenzisa indlela yokulinganisa ngobuningi kunciphisa ukukhishwa kwe-carbon dioxide ngamathani ayi-1.3. Ukukhishwa okuphansi kubangelwa ukugwema ukushiswa kwamathayi ezindala.
Kushicilelwe ngo-Okthoba 5, 2020 ku-Life Cycle Analysis, Isendlalelo Semakethe, Amapulasitiki, Ukusebenzisa kabusha, Amathayi | I-Permalink | Amazwana (0)
Isikhathi Iposi: Jan-18-2021
Umshini Wokusebenzisa Kabusha iTire, ITire Pyrolysis, Indawo Yokuhlanza Iplastiki, Umshini We-Plastic Recycling, Isitshalo Esiqhubekayo sePyrolysis, Iqoqo Le-Pyrolysis Plant,